China 8oz 250ml yeglasi yeglasi ibhotile ngentsimbi emnyama igwebu kwisixhobo kwisixhobo kwemveliso kunye mveliso | I-Easypack
Ibhotile yeglasi yegolide eyi-500ml ixhotywe ngesitayile esinezixhobo ezingama-304 zentsimbi / isepha yokuhambisa, ukuzisa ukuziva kuphelelwe lixesha kunye nokudala ekhayeni lakho. Ilungele ecaleni kwegumbi lokuhlambela okanye lokuhlambela ekhitshini. Ukusetyenziswa okuphindiweyo ukunciphisa inkunkuma ebangelwe kukupakisha.
Esi sixhobo sokucoca ngesandla esinokuphinda sisebenze sinokubonelela ngenketho enobuchule yokudibanisa uyilo oluhle kunye nokusebenza.
Yenziwe e-China ngeglasi yeglasi evuselelekayo kunye nempompo yentsimbi engenamphunga. Esi sisixhobo sinokusetyenziswa ngayo nayiphi na isepha oyithandayo kwaye iya kunciphisa inkunkuma yeplastiki kule minyaka imbalwa izayo.
Kulabo banqwenela ukongeza isitayile kwindawo yabo yokuntywila, okanye abo bathenga isepha ngobuninzi / gcwalisa iibhokisi zesepha, i-dispenser ilungile.
Yenziwe kwiglasi yeglasi yegolide emhlophe ekumgangatho ophezulu.
Iyahambelana nokuvalwa kwethu kwe-45mm.
Ibhotile enkulu yokuthwala iyafumaneka.
Egqithileyo 0.5oz 1oz 2oz 4oz cobalt blue blue iglasi ibhotile ngeenxa zonke ngeplastiki emnyama inkungu atomizer yokutshiza
Okulandelayo: 355ml 12oz ecacileyo iglasi isandla isepha ibhotile kwisixhobo matte emnyama stainless nempompo amagwebu kwisixhobo
16 Oz Amber Glass iibhotile Nge Pump
Iibhotile ze-Amber ezinepompo
Iibhotile zokupheka ezinempompo
Iibhotile zepompo yokupheka
Iibhotile zeGlasi eziMnyama
Sula iibhotile Pump Pump
Iglasi Bottle Nge Pump Top
Glass igwebu Pump Bottle
Iibhotile zeglasi zePompo
Iibhotile ezinkulu zeglasi yeglasi
Ibhotile yeglasi encinci
16oz ecacileyo Boston pump pump ngeenxa zonke plasti ...
8oz 16oz matte ulwelo isepha kwisixhobo glas ...
16oz 500ml umbala omhlophe boston ngeenxa zonke iglasi liqui ...
355ml 12oz ecacileyo iglasi isandla isepha ibhotile ma ...
8oz amber Boston ngeenxa zonke iglasi isitya isepha ibhotile w ...
Ibhotile yeglasi 400ml ngesandla ngesefu ste ...
Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi,